Batisa Andranotapahina 14 avril 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Fotoan-dehibe ho an’ny fiangonana Apokalypsy teo amin’ny rezionaly Antananarivo ny sabata 14 Aprily 2012 lasa teo satria nisy indray ny batisa lehibe niarahana tamin’ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol.
Araky ny efa nampahafantarina antsika teto dia nisy ny kaoferansa lehibe niarahana tamin’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol ny alahady 08 aprily 2012 lasa teo. Noho izay kaoferansa izay indrindra dia maro indray ireo olona tapak’evitra hiala amin’ny fanandevozan’ny ota ka nanolo-tena hatao batisa ny sabata 14 Aprily 2012 lasa teo. Manodidina ny 400 latsaka kely teo no vita batisa tamin’io fotoana io ary avy hatrany dia nandray ny fahefana izy ireo taorian’ny batisany. Mialohan’ny nanaovana batisa azy ireo anefa dia nizara ny tenin’Andriamanitra ho an’ireo mpino maro be tonga teny Andranotapahina Ambohidratrimo (toerana izay nanaovana ny fivoriam-bavaka sy batisa) ny ray aman-dreny pasitera Mailhol. Nalaina tao amin’ny Jaona 14: 1-6 sy Galatiana 3: 27-29 ary Apokalypsy 7: 13- 17 izay toriteny izay. Satria batisa tamin’io fotoana io dia manodidina izay ihany koa ny toriteny noentin’ny mpanompon’Andriamanitra.
Ankoatr’izay dia nanamarika iny faran’ny herinandro iny ihany koa ny fametrahana ny vato fototry ny fiangonana Apokalypsy teny Imerintsiatosika, paroasin’i Fenoarivo. Mirefy 44 metatra ny halavan’ity trano fivavahana haorina etsy Antsahavaradoha Imeritsiatosika ity ary 20 metatra kosa ny sakany. Tonga nanotrona izay fotoan-dehibe izay ny filoha iraisam-pirenen’ny fiangonana Apokalypsy, pasitera Mailhol mivady sy ireo delegasiona miaraka aminy. Nanatrika sy nanome voninahitra izay fotoana izay ihany koa ny solotenam-panjakana izay nisoloan’ny PDS tao Imeritsiatosika tena. Nandravaka io fotoana io ny rindran-kira ara-pilazantsara sy ny varotra fampiratiana ary ny lalao baolina kitra. Ireo hetsika rehetra ireo dia notanterahina ny Alahady 15 Aprily 2012 tontolo andro.
Fampianarana Apokalypsy ao amin’ny radio Fanambarana
Mitohy hatrany ny fampianarana ny bokin’ny Apokalypsy ao amin’ny Radio Fanambarana eto Antananarivo sy ny any amin’ny faritany. Ho an’ny ao amin’ny Radio Fanambarana Antananarivo manokana dia eo amin’ny toko faha 13 ny fanazavana amin’izao fotoana izao. Mampahery antsika izay manaraka izay fampianarana izay ary mirary ihany koa mba samy hahavita ny hazakazaka hatramin’ny farany. Efa miresaka izay radio fanambarana izay ihany isika dia ampahafantarina antsika fa efa andeha afaka fotoana fohy ny “web-radio” raha sitrapon’Andriamanitra. Efa eo am-pikarakarana ny mahakasika azy ity ny teknisiana amin’izao fotoana izao ary tsy ho ela dia afaka handray izay isika aty amin’ny faritany sy isika aty ampitan-dranomasina. Tamin’io fotoan-dehibe io dia nisy ny fanambarana lehibe izay nataon’ny pasitera Mailhol ka isan’izay ny vaovao lehibe mahakasika ity “web radio” ity. Ankoatr’izay anefa dia nambarany ihany koa fa hisy zavatra hiseho eto amin’ny firenena Malagasy amin’ity taona 2012 ity. “Hisy zavatra hitranga amin’ity taona 2012 ity… aoka isika hivavaka ho an’ny firenentsika” hoy ny Ray aman-dReny pasitera tamin’io fotoana io.
← Faha 10 taona ny FAM Toliara
Fivoriana Nasionaly 2012 →